Omunye imithi eminye esebenza ngempumelelo kakhulu, ukwehlisa umfutho wegazi, kuyinto "normodipin" imfundo manual elimchaza ngokuthi isithako yayo asebenzayo Amlodipine, okuyinto kuveza njengoba ikhambi elihlukile.
Tablets "normodipin" usizo ukuthuthukisa izitsha ezinkulu nezincane igazi. Ngaphezu kwalokho, e seziguli ezithola lokhu izakhi izidakamizwa kanye nowe-oxygen ufake kangcono izicubu kanye ukuzinza we izinqubo umzimba. Lokhu kubaluleke kakhulu mayelana nomzimba womuntu.
nohlu olubanzi kakhulu isenzo izidakamizwa "normodipin" imfundo manual ikhomba izifo ezifana nomfutho wegazi ophezulu kanye angina pectoris, - ukuthi umuthi usizo impela lezi zimo. Ukukhipha ngayo amaphilisi ezahlukene umthamo. ngemva kwamasonto Kakade emva elilodwa noma amabili ngokuthatha izidakamizwa, kungashiwo ngokuqiniseka ukuthi muhle kakhulu ekusizeni ukulwa-high blood pressure. Uma isiguli sine-enciphile umsebenzi kwesibindi nezinso, asikho isidingo ukulungisa inani amaphilisi athathwa.
Uma sikhuluma contra izidakamizwa "normodipin" imfundo manual iqukethe uhlu elandelayo kubo: umfutho ophansi wegazi, nokukhulelwa kanye lactation, kanye engu-nesishiyagalombili isimo angina engazinzile.
Naphezu kweqiniso lokuthi lokhu ukwelashwa kakhulu futhi ngempumelelo, ngesikhathi reception zakhe ezingase zibhekane nakho imiphumela emibi. Ngakho, uma sikhuluma esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, kungase kube komzimba, palpitations senhliziyo ngisho ukuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, indlela "normodipin" kungabangela ukuqunjelwa kwezinye izimo kungenzeka isibindi ukungasebenzi. Kulesi uhlu, ungakwazi ukwengeza kwemizwa uhlelo, urogenital kanye zemisipha, kanye umbono bungacaci isikhumba.
kuyingozi kakhulu izidakamizwa ukweqisa izidakamizwa "normodipin" imfundo manual uthi kulesi simo, cishe iconsi elibukhali ingcindezi. Kulokhu, kufanele ngokushesha ukwenza lavage esiswini. Uma ingcindezi uwile ngokucijile, walala isiguli nendawo futhi uphakamise imilenze yakhe Uma lokhu kungasizi, udinga ukuthatha umuthi constricts imithambo yegazi.
Ngokuthenga "normodipin" kufundiswe ngaphakathi iphakheji kuzokusiza uthole izimpendulo zemibuzo eminingi, njengokuthi singakunqoba kanjani ukuthatha leli imithi, yini ngezithako zawo. Kodwa namanje ngaphambi Inkambo yokwelashwa kufanele ngaso sonke isikhathi uxhumane nodokotela.
Lo mkhiqizo iyahambisana ejenti antihypertensive, kanye nitrate nezidakamizwa hypoglycemic. Umthamo kokuqala uqobo phakathi amabili nesigamu kuya angu ezinhlanu kanye phakathi kwamahora angu-24. Umthamo evamile - kuyinto angu ezinhlanu, futhi ngezinye izikhathi ibizwa kwandile alinganayo esiphezulu angu eziyishumi kanye ngosuku. Konke kuncike esimweni lapho isiguli itholakala. Kulabo ukusebenzisa ezokuthutha, kumele kusetshenziswe ngokuqapha kulesi izidakamizwa. Kuyefana nasendleleni labo abenza umsebenzi elihlobene ne emakamu eliphezulu ukunakwa. Phela, uma nisanda kokuqala ukwelashwa ukozela kungenzeka nesiyezi. Bese kukhona ingozi yengozi.
Uma sikhuluma "normodipin" amaphilisi le imithi libuyekeza ikakhulukazi omuhle. Abantu abaningi high blood pressure, futhi labo babe nesifo senhliziyo, ngingcono kakhulu uma uthatha lolu izidakamizwa. Kufanele isetshenziswe kuphela ngaphansi kweso lwezokwelapha, zokuzelapha akuvunyelwe. onguchwepheshe oqeqeshiwe kuphela kungakwenza yokwelapha scheme ngabanye, okuzokwenza uzokubuyisela impilo nenhlala-kahle kokuba benganhlanhlathi. Ngakho-ke, musa ukuzindela ukuxazulula izinkinga kamuva, uya kudokotela oyokusiza ukubhekana izifo. Qedela inhlolovo futhi ngesisekelo imiphumela uzobe enikezwa ukwelashwa okufanele.
Entsha amarekhodi lokushisa eMoscow